fanoratana ny sinograma 机
机 dia kanji ampiasain'ny fiteny japoney, ny fiteny koreanina ary ny fiteny sinoa. Voasokajy ao amin'ny tōyō kanji 当用漢字 tōyō kanji, kanji fampiasa) ity kanji ity.
KangXi : 0510.120
Morobashi : 14435
Hanyu Da Zidian : 21155.040
Ny laharan'ity kanji ity amin'ny Unicode dia U+673A. Ny fomba fampidirana ity kanji ity amin'ny fomba Cangjie dia 木竹弓 (DHN).
Ny fanononana pinyin an'ity sinôgrama ity dia jī (ji1) Tsindraindray afohezina ho Wade, ny Wade-Giles dia romanizasiôna ny fiteny mandarina. Io romanizasiôna io dia nampiasain'i Thomas Wade teo anivon'ny taonjato faha 19 ary novain'i Herbert Giles tao amin'ny rakibolany sinoa-anglisy tamin'ny 1912 ; io romanizasiôna io no nampiasain'i Taiwan sy ny tontolo miteny anglisy mandritry ny taonjato faha 20.
Ny fanononana Wade-Giles an'ity hanzi ity dia chih1
Hangul : 궤
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=机&oldid=155968"	Sokajy : KanjiHanzi sinoaHanja koreana	Menu de navigation